विप्लवलाई पूर्वकमाण्डरको पत्र– हामी जीवित लाश बन्ने कहिलेसम्म ? - Sisne Online
विप्लवलाई पूर्वकमाण्डरको पत्र– हामी जीवित लाश बन्ने कहिलेसम्म ?
जनमुक्ति सेनाका पूर्वबिग्रेड कमाण्डर जीतमान पुन ‘मार्शल’ले नेकपाका अध्यक्ष नेत्रविक्र चन्द ‘विप्लव’लाई पत्र लेख्दै क्रान्तिको अवमूल्यन भइरहेको प्रति प्रश्न उठाउनुभएको छ । हिजो हजारौंले रगत बगाएर ल्याएको राजनीतिक परिवर्तनको उपभोग वास्तविक जनताले गर्न नपाएकोमा पनि उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ ।
प्रस्तुत छ– विप्लवलाई लेखेको मार्शलको पत्र–
नमस्कार । (लाल सलाम गर्ने हैसियत अहिले मसित छैन ।)
जहाँ रहनुस्, मानसिक र शारीरिक दुबै हिसावले सःकुशल हुनुहुनेछ , कामना र बिश्वास । जीवित रहँदारहदै पनि पलपल मरिरहनुपर्ने यो कायरतापुर्ण जीवनका वस्तविकता बीचबाट जीवित लाशको दुई शब्द तपाईसम्म अबश्य पुग्नेछन, म बिश्वसत छु ।
बाहादुरीपुर्वक मृत्युलाई लल्लकार्दै बाँच्नु र शीर झुकाएर बाँच्नु बीचको अन्तरलाई भोग्ने सौभाग्य या दुर्भाग्या मिल्यो । जीवन जिउनका यी दुई बाटोमा पहिलो बाटो नै सही । तर, कहाँबाट कसरी फेरि के हुन्छ ? यी यस्तै प्रशनहरुको गोलचक्करबीच उभिएको छु ।
कमरेड ! आज निस्वार्थ प्रेम गर्नेहरु पाश्विक ढंंगले मारिन्छन । निर्मतापूर्वक श्रीमतीको हत्या गर्नेहरु उन्मुक्ति पाउँछन । गैँडा मार्ने तस्करहरु तारे होतेलहरुमा शासकहरुसित लन्च र डिनर गरिरहँदा प्राण धान्न जंगल पसेको चेपाङ मारिन्छ । दशगजामा टाउको फुटाउने मधेशीहरु धोती र भारतिय एजेन्ट भनेर अपहेलित छन, देशको भुभाग बेचेर सत्ता र सम्पति आर्जन गर्नेहरु रातारात राष्ट्रवादी भएकाछन ।
आँखै अगाडिका यी दृश्यहरु तर चुपचाप शालिकझैँ बस्नु पर्ने म । के म चेतनशील प्राणी हुँ ? के जिउनु को अर्थ यही हो ? बडेमाको घनले टाउकोमा हिर्काएझैँ ठोकिरहन्छन यी प्रशनहरु ।
कमरेड ! यी मेरो जिज्ञासा र छटपटीबाट छिट्टै मुक्त हुनेछु भन्ने बिश्वासका साथ बिदा ।
तपाइले जाने बुझेको– मार्शल